Umbono weMotorola One: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokuSungulwa | I-Androidsis
Umbono omnye weMotorola: Isizukulwana sesibini nge-Android One sisemthethweni
Umbono weMotorola yenye yezona fowuni zithethwa kakhulu kwezi veki zidlulileyo. Sisizukulwana sesibini sophawu ukusebenzisa i-Android One njengenkqubo yokusebenza. Kutshanje kuye kwabhengezwa umhla wakho wokufayilisha, emva kweeveki kukho inkitha ukuvuza malunga nale fowuni, enkosi apho besisele sazi iinkcukacha ezininzi malunga nefowuni. Ngoku, ityhilwe ngokusemthethweni.
Le Motorola One Vision isishiya neendaba ezininzi. Yifowuni yokuqala yophawu ukusebenzisa umngxunya kwiscreen, umkhwa ongakhange ususe njengoko abaninzi bekulindelekile. Yintoni egqithisile, njengoko besisele sazi iiveki ezidlulileyo, isebenzisa iprosesa ye-Samsung Exynos ngaphakathi. Enye yezinto ezimangalisayo kule fowuni.
Uyilo lolokuqala kwinkampani. IMotorola luphawu olungahambi ngokukhawuleza kwiindlela zentengiso, ezinje ngenotshi, umzekelo. Kule meko, babheja emngxunyeni kwiscreen. Uyilo esilubonileyo kwiimodeli ezithile ukuza kuthi ga ngoku, nangona kubonakala ngathi aluthandwa njengoko uninzi lwalulindele. Inikwe njengefowuni enomdla, enokubakho kweli candelo lentengiso.
1 Ukucaciswa kweMotorola One Vision
Umbono omnye we-Motorola One uzisiwe njengenketho yomdla phakathi kuluhlu. Inyani yokuba ifika nge-Android One isiqinisekisa ubuncinci iminyaka emibini yokuhlaziywa, okoko umgaqo-nkqubo awutshintshwanga. Ke ngoko, ithiwe thaca njengenketho abathengi abanokuyithanda kakhulu. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
Isikrini: I-6,3-intshi ye-LCD ene-HD epheleleyo + isisombululo sama-pixels angama-2520 × 1 080 kunye nomyinge wama-21: 9
GPU: Mali G72 MP3 GPU
Ikhamera esemva: I-48 + 5 MP ene-f / 1.7, i-OIS, i-4K yokurekhoda ukuya kwi-30 fps kunye ne-LED Flash
Ikhamera yangaphambili: MP eyi-25 ene f / 2.0 ukuvula
Conectividad: I-Bluetooth 5.0, i-USB-C, i-Dual SIM, i-WiFi 802.11 a / c, i-Headphone Jack, i-GPS, i-GLONASS
abanyeIsivamvo esingasemva somnwe, i-NFC, isandi seDolby yeaudio
Ibhetri: 3500 mah
Inkqubo yokusebenza: I-Android One (iPie ye-Android)
Ubungakanani: X x 160,1 71,2 8,7 mm
U bunzima: Iigram ezili-180
Njengoko sibonile iinyanga, ukubheja kwescreen see-intshi ezi-6 kugcinwa. Ngale ndlela, ibonelela ngamava okuntywila xa usitya umxholo kwifowuni. Iprosesa ye-Exynos 9609, yenye yeendawo eziphakathi ze-Samsung, nangona ayisiyiyo processor eyaziwayo ukuza kuthi ga ngoku (i-9610 yenye esiyaziyo). Iza nendibaniselwano eyahlukileyo ye-RAM kunye nokugcinwa. Kwibhetri kusetyenziswa i-3.500 mAh, ekufuneka inike abasebenzisi ukuzimela okuhle ngalo lonke ixesha.
Iikhamera yenye yamandla alo Mbono we-Motorola One. Inzwa ephambili yi-48 MP, kunye ne-5 MP yesibini. I-MP eyi-25 isetyenziselwa umphambili wefowuni. Zonke iikhamera esizifumanayo kwifowuni zisebenzisa ubukrelekrele bokufakelwa, obunika iindlela ezongezelelekileyo zeefoto, ukongeza ekuqondeni indawo. Ke sinokulindela ukusebenza kakuhle kwifowuni malunga noku. Inzwa yeminwe ibhalwe ngasemva kwisixhobo. Akukho nto ikhankanyiweyo malunga nokuvulwa kobuso, nangona kulindelwe ukuba kuluhlu oluphakathi njengolu luya kuba nalo.
I-Motorola One Vision isungula kwifayile ye- uqwalaselo oluyingqayizivele ngokwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi, njengoko sele sibonile kwinkcazo yayo. Ngokuphathelele imibala, sinokulindela ubuncinci imibala emibini, yile nto siyibonileyo kwiifoto. Ke, luhlaza okwesibhakabhaka kunye negolide / umbala wobhedu. Asazi ukuba kuya kubakho ezinye iindlela ezikhoyo.
Ixabiso lale Motorola One Vision liya kuba ngama-299 euros ekumiselweni kwayo eSpain. Ukuphehlelelwa kwayo kucwangciselwe ukuqala kukaJuni, nangona ungakhange unikwe umhla othile wokumiliselwa. Kungekudala kufuneka sazi ngakumbi malunga noku. Ukubhuka kuyavulwa kungekudala kwaye abo babhukisha ngoku baya kuba ne-headset ye-99 euro njengesipho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Motorola » Umbono omnye weMotorola: Isizukulwana sesibini nge-Android One sisemthethweni
Vula i-portal kwenye indawo ekhayeni lakho ngobunyani be-PHAROS AR